Dagaal Beeleed Khasaaro Geystay oo Ka dhacay Gobolka Sanaag | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Dagaal Beeleed Khasaaro Geystay oo Ka dhacay Gobolka Sanaag
Dagaal Beeleed Khasaaro Geystay oo Ka dhacay Gobolka Sanaag
Muqdisho (Halqaran.com)- Deegaan hoos yimaada Gobolka Sanaag oo lagu magacaabo Waqadariya ayaa waxaa laga soo sheegayaa in halkaas uu ka dhacay dagaal Culus, kaasi oo u dhexeeyay Maleeshiyo beeleed hubeysan oo ku dhaqan Deegaanka.
Iska hor imaadkaan ayaa waxaa uu sigaar ah uga dhacay deegaanka Waqadariya oo dhinaca Waqooyi Barri ee Magaalada Ceerigaabo ee Gobolka Sanaaag, isla markaana waxaa ka dhashay Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Goob joogyaal ku sugan halka uu ka dhacay dagaalka ayaa ku waramaya in dagaalkan uu ka dambeeyay kadib markii labada Maleeshiyo ay isku qabteen Dahab iyo macdano kale oo laga qoto buurta ku taalla deegaanka Waqadariya.
Saddex ruux oo labada dhinac ah ayaa ku geeriyooday dagaalka, halka tirro kalena ay ku dhaawacmeen.
wax war ah oo kasoo baxay ma jiro ilaa iyo hada maamulka Somaliland oo ku aadan dagaalkan ka dhacay deegaanka Waqadariya ee Gobolka Sanaag.
Dagaal beeleeyada ka dhaca Gobolka Sanaag ayaa aad u soo Noqnoqonayay muddooyinkan mana jiraan wax xal ah oo ilaa iyo hada muuqda oo lagu joojinayo Dagaaladaasi.